नक्कलीको आरोपमा शुक्रबार मात्रै उपत्यका बाहिरबाट १८ जना र उपत्यकाबाट १६ डाक्टर पक्राउ ! | | Nepali Health
नक्कलीको आरोपमा शुक्रबार मात्रै उपत्यका बाहिरबाट १८ जना र उपत्यकाबाट १६ डाक्टर पक्राउ !
२०७३ असार ४ गते ७:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ४ असार – नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज र चितवनबाट करिब तीन दर्जन चिकित्सकलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक खोज्ने र पक्राउ गर्ने अभियान सशक्त र प्रभावकारी बनाएसँगै शुक्रबार ठूलो सङ्ख्यामा चिकित्सक पक्राउ परेका हुन् ।
शुक्रबारमात्र विराटनगर, वीरगञ्ज, चितवनलगायत उपत्यका बाहिरबाट १८ जना र काठमाडौँमा १६ जना पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
ब्युरो प्रहरीले चार महिनाअघि ‘क्वाक’ अप्रेसनका नाममा सुरु गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका चिकित्सकको खोजी अनुसन्धान र पक्राउ अभियानमा यसअघि १७ जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा वरिष्ठ तथा सरकारी अस्पतालमा लामो समय बिताएका चिकित्सकसमेत छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत केही चिकित्सकसमेत पक्राउ परेका तर उनीहरूको नाम भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल र क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसन्धान भइरहेको ब्युरो प्रहरीले जानकारी दिएको छ । अनुसन्धान टोली केन्द्रबाट खटेको हो ।
त्यसैगरी कैलाली, बाँके, दाङ, बुटवल, वीरगञ्ज, झापा र विराटनगरमा ब्युरो प्रहरी नक्कली चिकित्सकको विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्रिय छ । मुलुकभर एक सय जनाभन्दा बढी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक रहेको अनुमान ब्युरो प्रहरीको छ ।
विराटनगरका चर्चित डाक्टरहरू नै नक्कली !
सीटीइभीटीको स्वास्थ्य विषय पढ्न एसएलसीमा ‘सी’ ग्रेड अनिवार्य